sosegado : November 2009
Shinagawa Prince to Big Sight အပိုင်း ၂
Exhibition နှင့် seminar က Tokyo Big Sight မှာ လုပ်ပါတယ်၊
Big Sight ကို အရင်ကရောက် ဖူးပေမဲ့၊ ရောက် ပြန်ပဲ၊ Odaiba မှာပဲ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။
Big Sight က ဂျပန်ရဲ့ မော်ဒန် ဗိသုကာ အဆောက်အဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ConferenceTower, East Exhibition Hall, West Exhibition Hall နှင့် Galleria ဆိုပြီး ကြီးမားစွာ ရှိပါတယ်၊
ထူးခြားအောင်လုပ်ထားတာကတော့၊ Works of Art ပဲဖြစ်ပါတယ်၊ နိုင်ငံတော်တော်များက အဆင်တူ လိုက်လုပ်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ ကိုးခု ရှိတယ် အောက်မှာကူးပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ၊ စိတ်ဝင်စားအောင် လုပ်ထားပါတယ်။
work of art Big Saw
ဂျပန် နာမည်ကျော် မင်းသမီးကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်မလို့ကြိုးစားစဉ်
There are9works of Art display at Tokyo Big Sight. Each harmonizes with its surrounding to create an enriched ambiance. Highly individualistic, these works of art are attracting large crowds.
Tokyo Big Sight (東京ビッグサイト Tōkyō Biggu Saito?) is the popular nickname for the Tokyo International Exhibition Center (東京国際展示場 Tōkyō Kokusai Tenjijō?),aJapanese convention center that opened in April 1996. Located in Odaiba of Tokyo Bay, the center is one of the largest convention venues within the city, and its most iconic representation is the visually-distinctive Conference Tower.
the contract in total worth no less than 40,392 million Yen. A considerable 45% of that sum went towards the sole handler of the Tower segment, the Hazama Corporation.
Posted by sosegado at 11/14/2009 07:29:00 PM3comments
Shinagawa Prince to Big Sight အပိုင်း ၁
ဒီတစ်ခါ Tokyo ကို Exhibition နှင့် Seminar တက်ရန် ရောက်ခဲ့ ပါတယ်။
Shinagawa Prince Hotel မှာပဲ စီစဉ် ပေးပါတယ်၊ ဒီဟိုတယ်မှာ (၄) ကြိမ် မြောက် တည်းရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊ Narita Airport, Haneda Airport, Shinjuku, Shibaura စသဖြင့် လွယ်သလို သွားနိုင်ပါတယ်၊ Shinagawa Station ကနေ လမ်းဖြတ်ကူး လိုက်ရုံပါပဲ ၊ အဓိက ကတော့ ပြပွဲကို Limousine bus စီစဉ်ပေးလို့ နှင့် သွားရလာရ လွယ်ကူလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြပွဲ နဲ့ seminar က Tokyo Big Sight (東京ビッグサイト Tōkyō Biggu Saito) မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညက 39th floor restaurant မှာ စားတာ တော်တော် ညံ့ပါတယ်၊ အစောကြီး ဗိုက်ဆာနေတယ်၊
ဒါနဲ့ နံနက် ဂ နာရီ မှာ မနက်စာ စားပြီး၊ အချိန် အားနေတာနဲ့ ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်ငေးဘို့ ထွက်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန် မှာပဲ Japan assistant က ဖုန်းဆက်လာတယ်၊ သူ စောရောက် နေ ပါတယ်တဲ့၊
သူ့ဆီ ပြန်လာခဲ့ပြီး၊ အကြံပေးတာနဲ့ ဟိုတယ်က Epson Aqua Stadium ကိုသွားဖြစ်ခဲ့တယ်။
Epson Shinagawa Aquarium က အသေးစား တခု ဖြစ်ပါတယ်၊ ဂျပန် နာမည်ကြီး Aquarium အခု ၂၀ ထဲမှာတော့ ပါပါတယ်။
ရောက်ဘူးတဲ့ Sunshine International Aquarium ikebukuro ထက်ငယ်ပါတယ်။ ဝင်ကြေး တော့ ပေါတယ်၊ Hotel Key ပြရင် ¥1500 ပဲ ပေးရတယ်။
Bowling alleys, Cinema, Indoor entertainment complex (Theme park) ပြီးရင် အပေါ်တက်လိုက်ရင် ရောက်ပါတယ်။
Cinema ဘက်က အဝင်
Shows တွေတော့ တခုမှ မကြည့် ခဲ့ရပါဘူး၊
တွေ့ ရှိရာဒေသ မှာ မြန်မာပါတယ်၊
တယောက်ယောက် နဲ့ တူသတဲ့၊
ငါး တော့ မတွေ့ရဘူး, ဟော်လ်လိုဝင်
Posted by sosegado at 11/06/2009 10:22:00 PM3comments
မြေအိုး ထဲကရေ ၊
ရေနှင့် လူသား၊ ရေနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရေနှင့် ကမ္ဘာ၊ ရေနှင့် ဂြိူလ်၊ ရေနှင့် စကြ ဝဠာ အဆုံး။
တနေရာမှာ အများကြီးကျ၊ တနေရာဆီ လုံးဝမကျ။
Posted by sosegado at 11/06/2009 10:14:00 PM0comments